Sida Lagu Ogaado Caanaha Caruurta Ee Been Abuurka Ah | WAJAALE NEWS
Sida Lagu Ogaado Caanaha Caruurta Ee Been Abuurka Ah
December 6, 2017 - Written by Reporter:
Zeng iyo seygeeda Shi waxay deggan yihiin magaalada Jiaxing, halkaas oo ay ku nool yihiin 1.2 milyan oo qof, magaaladaasi kama foga Shanghai. Ayaga iyo waalidiinta kale ee cusub waxay ka baqayaan caanaha warshadeysan ee caruurta, ka dib markii sannadihii la soo dhaafay la arkay kuwo wasakhaysan.
“Si buuxda uma aamini karo bakhaarada, suuqyada waawayn ama xittaa internet-ka. Waan ogahay mararka qaar in dadka ay waxkasta u sameynayaan lacag darteed,” ayey tidhi Zeng.
Balse waxay ogaatay in blockchain loo adeegsan karo in lagu xaqiijiyo sax ahaanshaha caanaha iyo cuntada caruurta. Ayadoo adeegsaneysa telefoonkeeda oo lagu xidhay qalab yar oo xaqiijinaya waxa ay alaabta tahay.
Qalabka Blockchain waxaa hadda isticmaala illaa toban shirkadood oo sameeya dawada oo ku yaalla Mareykanka. Sidoo kale laba tukaan oo iibiya boqolkiiba 50 dawada Mareykanka ayaa sameystay qalabkan.